Ngemva kokunqoba umqhudelwano kazwelonke, i-Enactus UKZN ibe ngompetha baseNingizimu Afrika! Leli thimba, ngemva kokunqoba emqhudelwaneni kazwelonke wangonyaka we-2020, likwazile ukuyomela iNingizimu Afrika kwiNdebe yoMhlaba engobuchwepheshe besimanje lapho liqhudelane khona namathimba asemazweni angama-35.
Okunye okuhle elikuzuze ezingeni lomhlaba wonke kulo nyaka yi-Ford Fund eliklomelise njengelinye lamathimba ali-14 avelele akwazile ukubhekana ngendlela entsha nezinselelo zeCOVID-19.
Emisebenzini ye-Enactus UKZN kukhona ezolimo, ezemfundo, ezokuvuselelwa kwamandla kagesi nokukhiqizwa kokudla okwenele, i-Aloe Go, ukulima ngamasaka, i-Pallet Project, iJonga Phezulu Agriculture Hub Farming Programme ne-Cleanville.
Amalungu ayo asebenza ngokuzikhandla ukuhlomisa imiphakathi esebenzisa nayo ukuxazulula izinkinga zamabhizinisi nezekusasa.
‘Ngijabule ukuthi siphinde saphumelela kwi-Enactus World Cup yangowezi-2020 njengoba besimele iNingizimu Afrika. Manje asisebona ompetha bezwe lonke kuphela kodwa futhi sikwi-Top 16 emhlabeni. Nakuba kube neCOVID-19 kulo nyaka, ithimba lethu lenza izinto ezinkulu liveza umoya wamabhizinisi ezomphakathi emiphakathini yakithi,’ kusho uMuhle Ndwalane, uMengameli we-Enactus UKZN.
UmQondisi oMkhulu oyiBamba le-Corporate Relations Division, uNks Normah Zondo, uthe i-Enactus UKZN iqhubekile nokwenza izinto ezinkulu ngokumela kahle iNyuvesi nokukhombisa umqondo omusha.
‘Siyaziqhenya futhi sijabulile ngokwenziwe yileli thimba losomabhizinisi abancane abanethuba lokuguqula umphakathi wakithi ube ngcono,’ kusho uZondo.
*I-Enactus, eyayibizwa nge-Students in Free Enterprise, iyinhlangano engenzi nzuzo emhlabeni wonke esebenzisana nabaholi kwezamabhizinisi nezemfundo ephakeme ukuvukuza abafundi basenyuvesi ukuthi benze umehluko emiphakathini yabo ngenkathi zicijelwa amakhono okuba ngabaholi bamabhizinisi abaqotho.